အဆိုပါ jobsite မှာ xuetao အဖွဲ့သည်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းသောသူတို့အားအပင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်, ရှိသမျှစက်ရုံ stably operated နှင့်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိ။ ဆွေးနွေးမှုအပြီး, xuetao အသုံးပြုသူများသည် '' ထင်မြင်ချက်များများအတွက်အစီအစဉ်များကိုဖန်ဆင်းသော xuetao အပေါ်သို့အသုံးပြုသူများနှင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ feedbacks မှနားထောင်ခဲ့တယ်။
ဒီအလှည့်လည်စစ်ဆေးခြင်းတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ် ယူ. 2600 ကျော်ကီလိုမီတာ; xuetao ကြီးမြတ်အကျိုးအမြတ်နှင့်အတူ 8 jobsites သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒီခရီးစဉ် xuetao မှတဆင့်အသုံးပြုသူများကောင်းသောပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းနှင့်စျေးကွက်တောင်းဆိုမှုများနှင့်နီးစပ်သော xuetao ထုတ်ကုန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Jiangsu Xuetao အကြီးစားစက်မှုကုမ္ပဏီလာရောက်လည်ပတ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ
ဒီဇင်ဘာလ 14 နေ့လည်ခင်းတွင်မစ္စတာ Zhou Fengnan, Xishan ခရိုင်၏ NPC ၏ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဝမ် Chen, Yangjian မြို့မြို့မြို့တော်ဝန်နှင့် 60 ခန့်ပုဂ္ဂိုလ်များ Jiangsu xuetao အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသွားရောက်ခဲ့ပြီး, အထွေထွေမန်နေဂျာမစ္စတာ zhanghua သူတို့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သူတို့ကလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြစဉ်, မစ္စတာ Zhang ဟွာကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခွအေနေမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဆိုပါခေါင်းဆောင်များ xuetao အကြောင်းနက်ရှိုင်းသောအထင်အမြင်ခဲ့သူတို့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်သိတယ်, xuetao ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်မြင့်မားသောချီးမွမ်းခြင်းကိုအနိုင်ရခဲ့သည့် stably processing ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
စက်ရုံလည်ပတ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း Class ကိုရောစပ် 8 အမျိုးသားကတ္တရာသုံး
xuetao ကတ္တရာ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျွမ်းကျင်မှုအပင်ဖော်စပ်နှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အခွက်လေ့ကျင့်တိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ, ကတ္တရာရောစပ်စက်ရုံ၏လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ operating5ရက်အတွင်းဇန်နဝါရီ 4th ထံမှ -8th Wuxi အတွက် xuetao အဖွဲ့ကကျင်းပနှင့် 30 နီးပါးအသုံးပြုသူကုမ္ပဏီများမှသင်တန်းသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြ ။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာမစ္စတာ Zhang ဟွာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်နွေးနွေးထွေးထွေးမိန့်ခွန်းကိုပေး၏။ သင်ခန်းစာပေးခြင်းအများအပြားအရည်အချင်းပြည့်မီအင်ဂျင်နီယာများစီစဉ်ပေး xuetao အောက်ပါရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေး contents တွေကိုကတ္တရာရောစပ်စက်ရုံ, ပူပြန်လည်အသုံးပြုရောစပ်စက်ရုံနှင့်အပူပေးကိရိယာများ, etc, ဒါပေမယ့်လည်းပါဝင်ပတ်သက်တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြ, သီအိုရီအသိပညာစာမေးပွဲနှင့် operating စမ်းသပ်မှု၏သီအိုရီအသိပညာကိုသာပါရှိသည်။ နောက်ဆုံးအထူးကုမှာစာမေးပွဲဖြေဆိုသူတို့ကိုလိမ့်မည်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အရည်အချင်းများလက်မှတ်ကိုဆက်ကပ်။
သင်တန်းလူတိုင်းမှတဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် shared အတွေ့အကြုံတွေကိုတိုးတက်လာသည်။ သင်တန်းပြီးနောက်အားလုံးသင်တန်းသား xuetao အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီသွားရောက်ခဲ့ပြီးလည်းသာယာလှပဒေသများ wuxi မှာနောက်ဆုံးအတူတကွညစာစားပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
25 ဇန်နဝါရီတွင်ကုမ္ပဏီ၏အင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုငှားရမ်း xuetao အဘို့ပွဲကျင်းပသည့်တရုတ် Lunar New Year, xuetao အုပ်စုတစ်စုမီ။ ဤအအင်ဂျင်နီယာများမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကို '' ထောက်ခံမှု, xuetao အုပ်စုတစ်စု၏ထုတ်ကုန်အောင်အောင်မြင်မြင် install နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပွဲသို့, ကဗျာနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးတော့အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဒုအထွေထွေမန်နေဂျာနွေးနွေးထွေးထွေးမိန့်ခွန်းကို ပေး. , လူတိုင်းညစာနှင့်ပျော်ရွှင်နှစ်သစ်ပျော်မွေ့လိုရှိ၏။ အဆိုပါပွဲသို့စဉ်အတွင်းလူတိုင်းကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်, သူတို့ကသီဆို, သောက်သုံးပိုင်ဘာ xuetao လည်းကံကောင်းသရေကျကျင်းပခဲ့ပြီး, အခြို့ကံကောင်းအဖွဲ့ဝင်များကအံ့အားသင့်စရာဆုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒုတိယအချိန်နှင့် 2016 အကျဉ်းချုပ်ချီးမွမ်းအစည်းအဝေးများအတွက်ပဉ္စမအစည်းအဝေး
Feb12th နေ့လည်ခင်း 2017 တွင်, Xuetao Group မှဒုဥက္ကဋ္ဌများ 2016 ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာ Qian Zhuyun ၏ဒုတိယအချိန်နှင့်အကျဉ်းချုပ်ခြီးမှမျးအစည်းအဝေးပဉ္စမအစည်းအဝေးကျင်းပမစ္စတာ Tang Jinming, etc ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, အထွေထွေမန်နေဂျာမစ္စတာ Zhang ကဟွာ, တက်ရောက်ခဲ့သည် အစည်းအဝေး, xuetao အုပ်စုအားလုံးန်ထမ်းများကပါဝင်ခဲ့။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်ဒုအထွေထွေမန်နေဂျာမစ္စတာယန် Honggang အားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးကာလအတွင်းမစ္စတာ Zhang ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 2016 ၏အောင်မြင်မှုများနှင့်ချို့ယွင်းချက်အကျဉ်းချုပ်, ငါတို့သည် 2016 ရဲ့အစမှာလုပ်ပစ်မှတ်ရောက်ရှိကျနော်တို့တီထွင်မှု6utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်နဲ့ 1 မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်ကို optimized, ဖန်တီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်လာသည်။ တစ်နှစ်ရဲ့အထှကျပွီးနောကျ, Jiangsu ယခု stably operating အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ xuetao နှင့်ကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်မစ္စတာ Zhang ကကြီးမားသောတိုးတက်မှုအောင်ကြိုးစား, 2017 များ၏ပစ်မှတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့အပြင်သူသည်အသီးအသီး "လက်သမား" နှင့် "အပျနှံ" ၏ဝိညာဉျတျောသင်ယူဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ငါတို့သည်လည်း "လက်သမား" နှင့် "အပျနှံ" စိတ်ဝိညာဉ်၏ဆုထားကြ၏။ ထို့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုအကျဉ်းချုပ်နှင့်အဆင့်မြင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် 2016 ၏အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းချီးမွမ်းခြင်းအစည်းအဝေးကိုလည်းပထမဦးဆုံး xuetao မိုဘိုင်းဖုန်းဓာတ်ပုံကိုပြိုင်ပွဲ၏ဆုရရှိသူချီးကျူးသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာ Qian Zhuyun မျှော်လင့်ချက်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ကအဆောက်အဦးပိုကောင်းအောင်အပေါင်းတို့နှင့်စနစ်များကိုဖြည့်စွက်နိုင်ကပြောသည်။ သူကလူတိုင်းကိုယခုနှစ်ပစ်မှတ်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်အလုပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းမျှော်လင့်; တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းလူတိုင်းကို "လက်သမား" နှင့် "အပျနှံ" ၏ဝိညာဉျတျောသင်ယူဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။
7th မတ်လ .afternoon ခုနှစ်, xuetao အုပ်စုတစ်စု၏အမျိုးသမီးလုပ်သားများ Nianhua ပင်လယ်အော်သာယာလှပဧရိယာတစ်ဦးနွေဦးခရီးစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်အမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးနေ့ကလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ် xuetao အဖွဲ့ကကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာ Qian Zhuyun နှင့်ဒုဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာ Tang Jinming အဆိုပါဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ခဲ့ရပြီးလှပတဲ့ရှုခင်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။